‘Politics, Corruption Retarding ... - Zimbabwe-Today
2020-06-19 Although government is targeting to build a US$12-billion mining sector by 2023, inconsistency, double standards, double allocations, as well as incompetence caused by a bureaucratic system, could stand in the way if decisive action is not taken.
Perfomance of the Zimbabwe mining sector in 2019 - Events
2019-10-15 Zimbabwe aims to increase the annual revenue of its mining industry from $4bn to more than $12bn over the next four years.
•MINING MATTERS he mining sector in Zimbabwe has been backed to be the economic resuscitator of Zimbabwe, however, with the continued power cuts and other economic problems facing the country, the industry’s predicted growth might be thrown into an abyss of no hope.
Zimbabwe Economy 2020, CIA World Factbook. Zimbabwe's economy depends heavily on its mining and agriculture sectors. Following a contraction from 1998 to 2008, the economy recorded real growth of more than 10% per year in the period 2010-13, before falling below 3% in the period 2014-17, due to poor harvests, low diamond revenues, and decreased investment.